स्वास्थ्यमन्त्रीले काम देखाउन सकेनन्, हटाउन जति सक्दो दबाब बढाऔं « Bikas Times
स्वास्थ्यमन्त्रीले काम देखाउन सकेनन्, हटाउन जति सक्दो दबाब बढाऔं
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले सोमबार मन्त्रालयमा भिडभाड लगाएर पत्रकार सम्मेलन गरे । र उनले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन नै आफैंले पत्ता लगाएको झै गरी भने, ‘फ्रान्सबाट आएकी एक १९ वर्षीया युवतीमा कोरोना संक्रमण पाइएको छ ।’
प्रश्न यो हो, ‘यति सूचना दिन मन्त्री आफैंले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्ने हो ?’ ती युवतीमा कोरोना देखिएको रात सूचना कतै चुहाइएन । भोलिपल्ट मंगलबार एम्बुलेन्स पठाएर युवतीलाई टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल लगियो ।
पत्रकार सम्मेलन र अन्य अवसरमा कोरोनाविरुद्ध लड्न अभूतपूर्व कार्य गरिरहेको दावी गर्ने मन्त्री ढकालको संयन्त्रले ती युवतीका परिवार र उनीसँग सम्पर्कमा आएकाहरुमा कोरोना छ छैन भन्ने परीक्षण बुधबारसम्म गरेन ।
कोरोना संक्रमण भए नभएको परीक्षण काठमाडौंको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्रै हुन्छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना परीक्षण सातै प्रदेशमा गर्ने भनेर भाषण गरेको धेरै भइसक्यो तर अहिले लक डाउनका कारण विभिन्न स्थानबाट नुमना काठमाडौं पुर्याउन समस्या भइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । काठमाडौं बाहेक अन्यत्र प्लेटफर्म रहेको, दक्ष जनशक्ति पनि रहेको अवस्थामा बाँकी काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नु पर्ने हो कि होइन ?
तर मन्त्री ढकाललाई यस्तो संवेदनशील कुरामा काम गर्ने अहिलेसम्म फुर्सद छैन, थाहा छैन उनी कुन बढी महत्वपूर्ण कार्यमा अल्झिएका छन् ।
मुलुकभर यसपटक मेडिकल पसल, डिलरहरुले मास्क र स्यानिटाइजरको कालोबजारी गरे । करिब २ महिना कालोबजारी भयो । अन्तिम अन्तिम समयमा आएर केही पक्राउ परे । बाँकीले आफ्नो दुनो सोझ्याए । कालोबजारी भएको थाहा पाउने बित्तिकै सरकार एक्सनमा उत्रिनुपर्ने थियो । मन्त्री ढकालको यो काममा पनि पछि नै परे ।
लक डाउनमा मानिसहरुलाई खाद्यन्नकै अभाव हुन सक्छ । खाद्यन्न अहिले नै अभाव भइसकेको छैन । जीवन र मृत्युको सवालमै मन्त्री ढकालको संयन्त्रले मजाक गरिदिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि पिपिइको बन्दोबस्त छैन । चीन सरकारले दिन्छौं भन्दा पनि मन्त्री ढकाल दक्षिणतिर मुख लगाएर किन बसेका हुन् थाहा छैन ।
कोरोना रोक्ने सवालमा सरकार भारतसँगै सति जान खोज्यो । नाका बन्द गरौं भन्ने जनदबाब एकातिर राखेर भारतीय राजदूतका अगाडि लम्पसार परेको त देखियो नै । भारतमा लक डाउन हुँदा यता हुने, नहूँदा नहुने, उता २१ दिन हुँदा यता पनि लक डाउन बढाउने भनेर त मन्त्री ढकालले बोलि नै सके ।
भारतमा लक डाउन हुनै लाग्दा नेपाल फर्किने नेपालीहरुको सुझबुझमा पनि कमि नै देखियो । उनीहरु जहाँ बस्थे, त्यही बस्नु उनीहरुको पनि हितको कुरा थियो । तर उता सुनामी आएकोले भागेर नेपाल आउन खोजे जस्तो देखियो । क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने अल्प बुद्धि पनि नेपालीले देखाए । यस्तो विषय स्वास्थ्यमन्त्रीको लगामभन्दा बाहिर गयो ।
अब मन्त्री ढकालमाथि तेर्सिएका प्रश्नहरु छन्ः
मास्क छैन, जिम्मेवारी कसको ?
स्यानिटाइजर छैन, जिम्मेवारी कसको ?
कालाबजारी भयो, रोक्न किन नसकेको ?
पिपिइको बन्दोवस्त गर्ने जिम्मेवारी कसको ?
कोरोना परीक्षण सातै प्रदेशमा गराउने जिम्मेवारी कसको ? किन नसकेको ?
भारतसँगै ‘सति जाने’ नियम के डब्लुएचओले जारी गरेको हो ?
अहिलेको परिवेशमा यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुन् । सबैभन्द महत्वपूर्ण पक्षमै स्वास्थ्यमन्त्री सफल छैनन् भने यिनलाई किन कुर्सीमा राखिरहनु पर्यो ? यिनी नहुँदा पनि अहिले भएजति काम त भइहाल्छ । भनेपछि अतिरिक्त एक मन्त्री पाल्नु पर्ने के बाध्यता छ ?
]यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई अनुुरोध गरौं, सकिन्छ एक योग्य व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुहोस् । यो संकटको घडीमा प्रतिपक्षी वा दलविहिन जताबाट ल्याए पनि हुन्छ । होइन, नगर्ने हो भने कम्तिमा ढकाललाई चाहिँ मुक्त गरिदिनुहोस् । उहाँले पाहुनासँग समय बिताउन पनि पाउनुहुनेछ ।
सरिता गिरिलाई सासद र पार्टी सदस्यबाट निस्कासन गर्न कार्यदलको सिफारिस, जसपाको पदाधिकारी बैठक बस्दै
जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेको कार्यदलले सांसद सरिता गिरीलाई सांसद तथा पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत
चिनियाँ राजदुतको सक्रियतामा नेकपाका अध्यक्षद्धय मिल्ने संकेत, माधव नेपाल एक्लिने संभावना बढ्यो
चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियतामा नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको विवाद समाधान हुने संकेत देखा पर्न थालेका